कपाल काट्न नमानेको बालकले नाईलाई दिएको चेतवानीका शब्द सुन्दा दुनियाँ हैरान ! [भिडियोसहित] – NepalajaMedia
March 27, 2021 12402
काठमाडौं । सानोमा धेरैलाई कपाल काट्न डर लाग्ने गर्दछ । कान नरहने पो हो की लगायत विभिन्न डरका कारण धेरै बच्चाहरु मानसिक रुपमा यसका लागि तयार हुँदैनन् । धेरैलाई जानकारी छ कि बच्चा धेरै नै जिद्दी स्वभावका पनि हुन्छन् । यस्तै एक बच्चाको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
चेतावनी दिदैँ उनी भन्छन्, ‘म एकदम रिसाएको छु । म तिम्रो सबै कपाल काट्छु ।’ यो भिडियो उसको बुबा अनूपले ट्विटरमा साझा गरेका छन् । साथै क्याप्शन पनि लेखेका छन्, ‘मेरो छोरो अनुश्रुत, यो हरेक अभिभावकको लागि संघर्ष हो ।’ उनले कपाल काटेपछिको भिडियो पनि सेयर गरेका छन् । लाखौं व्यक्तिहरुले यो भिडियो हेरेका छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
Prevशनिबारको दिन भूलेर पनि यी पाँच चिज नखानुहोस्
Nextछोरा बुहारीको सुत्ने कोठाको गतिविधि हेर्न जव सासुले आफ्नै कोठामा लगाइन मोनिटर !
चर्को घाममा मकै पोल्ने ७६ वर्षीय आमा बुवा, यसरी सुनाए आफ्ना दुःखका कथा (भिडियो)